OTU ESI ESI MMANYE ONYE NLEKOTA ORU NA NHAZI - NHAZI - 2019
Lubricate onye nlekota oru na nhazi
Egwuregwu niile e mere iji rụọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows chọrọ ijide otu ụdị nke DirectX components maka ọrụ ha. A na-edozi ihe ndị a na OS, ma, mgbe ụfọdụ, a pụrụ "ịwapụ" na egwuregwu ịwụnye egwuregwu. Ọtụtụ mgbe, nhazi nke nkesa ndị dị otú ahụ nwere ike ịda, na ntinye ọzọ nke egwuregwu ahụ anaghị ekwe omume. Ụgha na-emekarị n'ọnọdụ a - "Error Setup Setup: Njehie nke imehie mere".
Nzihie nhazi DirectX
Dịka anyị kwuru n'elu, mgbe ị na-etinye egwuregwu na DirectX, a nwere ike ịdaba, nke akara na-esonụ:
Nsogbu a na-emekarị mgbe a na-edozi ihe eji egwuri egwu nke chọrọ ụfọdụ n'ime ihe ha na DX mbipute iji rụọ ọrụ, nke dị iche na nke dị na usoro. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a bụ akụkụ dị mma nke ọrụ ahụ. Nsogbu a dị na ikikere nke faịlụ na ntọala ndekọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ntinye nke egwuregwu ahụ dịka onye nchịkwa, ọ gaghị eme ihe ọ bụla, ebe ọ bụ na onye na-arụ ọrụ na DX enweghị ikike dị otú ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịnwe ihe ndị ọzọ na-akpata ọdịda, dịka ọmụmaatụ, faịlụ usoro mmebi. Otu esi edozi ha, anyi ga ekwu okwu n'ihu.
Usoro 1: Nwelite ngwa ngwa
Usoro a dabara adaba maka Windows sistemụ site na XP ruo 7, ebe ọ bụ na enweghị mmelite ntuziaka 8 na 10. Iji dozie njehie ahụ, ị ​​ga-ebudata ma wụnye installer ọfịs ụlọ akwụkwọ DirectX maka onye ọrụ njedebe. Enwere nhọrọ abụọ: ntanetị weebụ ma zuru ezu, ya bụ, anaghị achọ njikọ Ịntanetị. Naanị otu nwere ike ịrụ ọrụ, ya mere ọ bara uru na-agbalị ma.
Weebụ weebụ ntanetị weebụ
Na ibe na-esote, wepụ ihe niile jackdaws, ma ọ bụrụ na ha arụnyere, wee pịa "Na-ajụ ma nọgide".
Ụdị zuru ezu nke "ụgha" na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Nbudata akwukwọ zuru ezu
N'ebe a, ịchọrọ ime ihe na checkmarks ma pịa "Enweghị ekele ma nọgide".
Mgbe nbudata, ị ga-enyerịrị dị ka onye nchịkwa, ọ dị ezigbo mkpa. Emere nke a dika: pịa PKM na faịlụ ebudatara ma họrọ ihe "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Omume ndị a ga-enye gị ohere imelite faịlụ DX ma ọ bụrụ na ha mebiri emebi, na ịdebanye aha ndị dị mkpa na ndekọ ahụ. Mgbe usoro nhazi ahụ zuru ezu, malitegharịa kọmputa ma gbalịa ịwụnye egwuregwu ahụ.
Usoro 2: nchekwa egwuregwu
Mgbe ị na-etinye site na Mmalite, ọ bụrụgodị na ọ kwụsịrị na njehie, onye nchịkọta ahụ na-achịkwa ịmepụta nchekwa dị mkpa ma wepụ faịlụ ndị ahụ. Anyị nwere mmasị na ndekọ nke ebe ndekọ DirectX dị. Ọ dị na adreesị dị n'okpuru. N'okwu gị, nke a nwere ike ịbụ ebe ọzọ, ma nchekwa osisi ahụ ga-adị.
C: Egwuregwu Ebumpụta ụwa nke Ọgbọ 4 __ Nchịkọta directx redist
Site na ndekọ a, ị ga-ehichapụ faịlụ niile ma e wezụga atọ edepụtara na nseta ihuenyo n'okpuru.
Mgbe nhichapụ, ị nwere ike ọzọ gbalịa ịwụnye egwuregwu ahụ site na Mmalite. Ọ bụrụ na njehie ahụ kwughachi, mgbe ahụ na-agba faịlụ DXSETUP na folda ahụ "redist" n'ihi onye nchịkwa ma chere maka njedebe nke nwụnye ahụ, wee jiri nhazi ahụ malite ọzọ.
Ihe dị n'elu bụ otu n'ime nsogbu ụfọdụ nke nsogbu ahụ, ma a pụrụ iji ihe atụ a na ọnọdụ na egwuregwu ndị ọzọ. Egwuregwu egwuregwu ndị na-eji nsụgharị akwụkwọ ochie nke DirectX na-agụnye ihe nhazi yiri. Naanị ị chọrọ ịchọta folda kwesịrị ekwesị na kọmputa gị ma gbalịa ime ihe a kapịrị ọnụ.
Njehie ahụ a kọwara n'isiokwu a na-agwa anyị na nsogbu ụfọdụ dị na usoro ahụ dị n'ụdị faịlụ mebiri emebi ma ọ bụ igodo ndekọ ndị na-ahụ maka ọrụ nkịtị nke DirectX components. Ọ bụrụ na usoro ndị a adịghị edozi njehie ahụ, ị ​​nwere ike ịnyegharịa Windows ma ọ bụ jiri ndabere. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ bụghị isi maka gị igwu egwuregwu a, ị nwere ike ịhapụ ya dị ka ọ dị.